Al-shabaab iyo dowladda oo ku dagaalamay Aaga degmada Bardaale ee gobolka Baay (Dhegeyso) – Radio Daljir
Seteembar 6, 2013 3:12 b 0
Bardaale, September 6, 2013 – Ciidamada dowladda federaalka ah ee gobolka Bay ayaa xalay weerar ku qaaday deegaano ku dhow degmada Bardaale ee gobolka, halkaas oo ay joogeen ciidamo ka tirsan ururka Al-shabaab oo gaadiidka ka qaadi jiray lacago baad ah.
Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan (Caracase) oo la hadlay Radio Daljir, ?ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen Bar Kantarool oo ay fadhiyeen ciidamo ka tirsan ururka Al-shabaab isla markaasna ay la wareegeen.
? Halka aan weerarnay waa meel ay dadka kaga qaadi jireen lacago baad ah weliba gaadiidka waan la wareegnay, waxaana dilnay labba ka tirsan kooxdii meesha joogtay, dhinacayaga ma jiro wax khasaare ah? ayuu yiri Mudane Caracase.
Maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay waxay sheegeen in ay weli wadaan howgalka ka dhanka ah ururka Al-shabaab ee deeganada ku dhow degmada, Gudoomiyuhu wuxuu intaas ku daray in howglalku sii socon doono, balse ururka Al-shabaab ilaa hada kama aysan hadlin arintaan.
Dhegeyso: Gudoomiyaha Bardaale oo u waramay Cabdiraxmaan Axmed Yuusuf